dehumidifier dphg150s-x နှင့်အတူအပူချိန်နိမ့်ပင်လယ်သခွားသီးခြောက်စက် | Twesix
ပစ္စည်းဗန်းပေါ်ရှိပြုတ်သောပင်လယ်သခွားသီးကိုပစ္စည်းဗန်းပေါ်ရှိရေကူးခန်းခြောက်ခန်းထဲသို့ထည့်ပြီးအပူချိန်, စိုထိုင်းဆကိုအပူချိန်, စိုထိုင်းဆနှင့်အချိန် parameters တွေကိုထည့်သွင်းပါ။ အကယ်. ၎င်းသည်သာမန်ဆားခြောက်သွေ့သောပင်လယ်သခွားသီးဖြစ်လျှင်ခြောက်သွေ့သောအပူချိန်ကိုအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ အကယ်. ၎င်းသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောသို့မဟုတ်ရေခြောက်သွေ့သောပင်လယ်သခွားသီးများဖြစ်လျှင်လေယာဉ်သခွားသီးအအေးလေကြောင်းခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောခြောက်သွေ့သောအခြောက်လှန်းခြင်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။ နှင့်ပင်လယ်သခွားသီးအထူးရနံ့ရှိပါတယ်။
ပင်လယ်တွင်ပါ0င်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်များ
ပင်လယ်သခွားသီးကိုဖြတ်ပြီးအူကိုညှစ်ပါ။ ပင်လယ်သခွားသီးကိုသန့်ရှင်းသောရေဖြင့်ဆေးကြောပါ။ ဝမ်းဗိုက်မှပါးစပ်မှပါးစပ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးစင်တီမီတာကိုဖြတ်ပြီးကတ်ကြေးများဖြင့်ဖြတ်ပြီးအတွင်းပိုင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်အူများကိုထုတ်ယူပါ။ အူမကိုမဖယ်ရှားပါကပင်လယ်သခွားသီးတစ်လုံးလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်လိမ့်မည်။
စင်ကြယ်သောပင်လယ်သခွားသီး။ ပင်လယ်သခွားသီးများကိုသန့်ရှင်းရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်အတွင်းပိုင်းကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများကိုထုတ်ယူပြီးနောက်ပင်လယ်သခွားသီးများကိုအကြိမ်ကြိမ်သန့်စင်ပြီးများသောအားဖြင့်သူတို့သန့်ရှင်းသည်အထိ5ကြိမ်သန့်စင်ကြသည်။
ရေနွေးငွေ့နှင့်ချက်ပြုတ်ပင်လယ်သခွားသီး။ ရေအပူချိန်သည် 90 ဒီဂရီရှိသည့်အခါသန့်ရှင်းသောပင်လယ်သခွားသီးကိုအိုးတစ်လုံးထဲထည့်ပြီးချက်ပြုတ်ပါ။ ဤအချိန်တွင်ပင်လယ်သခွားသီးလျှင်မြန်စွာကျုံ့သွားပြီးပင်လယ်သခွားသီးကျောရိုးများသည်သိသာထင်ရှားသည့်ပင်လယ်သခွားသီးများကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ နာရီဝက်ခန့်အကြာတွင်ပင်လယ်သခွားသီးကိုထုတ်ယူပြီးသင့်လျော်သည့်အတိုင်းကြမ်းဆားများချမှတ်ပါ။